प्रचण्ड : अरुका लागि अभिभावक, आफूलाई पर्दा 'एक्ला बृहस्पति' !
प्रचण्ड : अरुका लागि अभिभावक, आफूलाई पर्दा ‘एक्ला बृहस्पति’ !
१० मंसिर २०७५, सोमबार २०:२१
लोकपाटी टिप्पणी । माक्र्सवाद भन्छ, ‘नेता आवश्यकता र आकस्मिकताको संयोगबाट जन्मिन्छ ।’ विश्वभरिका माक्र्सवादीहरूले मान्दै आएको दार्शनिक मान्यता पनि यही हो । तर, आवश्यकता र आकस्मिकताको संयोग मात्रैले नेतृत्व जन्मदैन । नेता बन्न व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभाको पनि कम भूमिका हुँदैन ।
प्रचण्ड तिनै व्यक्ति हुन्, जो राजनीतिक आन्दोलन पाँच अवधिको नेतृत्व गरे । प्रचण्ड नै त्यस्ता युवा क्रान्तिकारी थिए, जसले पहिलोपटक माओ र चाओ ठानिएका मोहनविक्रम र निर्मल लामाहरुसँग वैचारिक सङ्घर्ष गरे । २०४४ को ‘सेक्टर काण्ड’पछि प्रचण्ड मशालको महामन्त्री छानिए । महामन्त्री छानिएलगत्तै प्रचण्डले दक्षिणपन्थी भन्नेहरूबीच एकताको पहल गरे । २०४६ सालको जनआन्दोलन भयो, अनि सम्झौता पनि । त्यसपछि माले र माक्र्सवादीहरू मिलेर एमाले बन्यो । क्रान्तिको सपना बोकेर प्रचण्डले नेकपा (एकता–केन्द्र) निर्माण गरे ।
दोस्रो, २०५२ माघमा प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र थमाइयो, त्यसमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका ज्वलन्त ४० बुँदा थिए । देउवाले परिवर्तनको भाषा बुझेनन्, प्रचण्ड मिसन बुझ्नसक्ने हैसियत पनि थिएन । अन्ततः २०५२ फागुन १ मा जनयुद्धको उद्घोष भयो । जनयुद्ध पृथ्वीनारायण शाहको राज्य बिस्तार अभियानपछिको सबैभन्दा ठूलो फौजी सङ्घर्ष थियो । माओवादी सरकारको विरुद्ध लड्ने फौजी शक्तिमा मात्रै सीमित रहेन, आफै सेना, सत्ता र अदालतको अभ्यासमा लाग्यो । करीब १५ हजारको बलिदानी र ११ वर्ष लामो राजनीतिक संघर्षको प्रचण्ड आफैले नेतृत्व गरे ।
नेपाली राजनीतिमा पुष्पलाल, मनमोहन, ओली, मोहनबिक्रम लगायतका बामपन्थी नेता पनि सत्ता विरुद्धको सङ्घर्षबाटै आए । तर, उनीहरुको सङ्घर्ष प्रचण्डको जस्तो दीर्घकालीन, जोखिमपूर्ण र फौजी संघर्ष थिएन । माओत्सेतुङ, गोञ्जालो, चे–ग्वेभारा, फिडेल क्यास्ट्रोजस्तै प्रचण्ड पनि प्रत्यक्ष फौजी मोर्चाका कमाण्डर थिए । यद्यपि, माओ, क्यास्ट्रो सत्तामाथि विजय हासिल गरे, गोञ्जालो, ग्वेभारा दमनको शिकार बने भने प्रचण्ड सम्झौताको गन्तव्यतिर सोझिए ।
२०६२ मंसिरमा माओवादी–संसदवादी शक्तिबीच भएको १२ बुँदे समझदारीले जनआन्दोलन सृष्टि ग-यो । माओवादीहरू पनि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका हिस्सेदार भए, अनि संसदवादीहरू जनयुद्धका शुभेच्छुक । यही समझदारीले २४० वर्ष पुरानो एकात्मक सत्ताको अन्त्य गरी गणतन्त्रको ढोका खोल्यो । १२ बुँदे समझदारीकै जगमा टेकेर २०६३ मंसिर ५ मा गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
यी सबै आन्दोलनको कमाण्डर हुन् प्रचण्ड । जब देशलाई सङ्कट पर्छ, सबैले खोज्छन् प्रचण्ड । नेपाली राजनीतिमा उनी प्रचण्ड यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले हरेक समस्या सुल्झाउन कुनै न कुनै सुत्र निकाल्छन् । सङ्कटका बेला सबैको साझा अपेक्षा हुन्छ, ‘यसमा त प्रचण्डले नै पहल लिनुपर्छ, समाधान खोज्नुपर्छ ।’ उनी देशका मात्र होइन, सबै राजनीतिक पार्टी र नेताहरुका लागि पनि अभिभावक छन् ।
‘प्रचण्ड दैलो’ मा राजनीतिदेखि वैयक्तिक समस्या समाधानका सुत्र खोज्न दैनिक सयौं मानिसहरुको भीड लाग्छ । आफ्नै पार्टी होस् वा विपक्ष, सबैले उनलाई नै खोज्छन् । ‘लचक’ प्रचण्ड सबैको चित्त बुझाउन हरदम प्रयत्न गर्छन् । आकाङ्क्षाहरु चुलिएको समाज र राजनीतिमा प्रचण्ड सुत्र पनि जादुको छडी होइन । तर, उनले हमेशा सबैको अभिभावक बन्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् ।
तर, तिनै प्रचण्ड जतिबेला आफू समस्यामा पर्छन्, त्यतिबेला खुल्ला हृदयले सहयोग गर्ने व्यक्ति भेट्न मुस्किल पर्छ । राजनीति, समाजदेखि पारिवारिक मामिलासम्म प्रचण्डको दुखमा साथ दिने नेता–कार्यकर्ता मुस्किलले भेटिन्छन् । हरेक कामको नतिजा जस्तो आउँछ, त्यसको जस आफू लिन्छन्, अनि अपजस चाहिँ प्रचण्ड थाप्लोमा । सबैको दुखमा साथ दिने प्रचण्ड जब आफू समस्यामा पर्छन्, तब एक्लो बृहस्पतिजस्ता देखिन्छन् ।
कतिपय मामिलामा प्रचण्ड आफै बोल्न मिल्दैन र बोल्दैनन् । तर, उनको मौनताको अर्थ र गहिराई बुझिदिने सारथि पनि भेट्न कठिन छ । सबैले ‘विरोधीको बोलीमा लोली’ मिलाउँछन् र धारे हात लगाउँछन् । आखिर प्रचण्ड पनि त मानिस हुन्, उनीमा पनि संवेदना छ, पीडा र व्यथाको चाङ छ । ‘गोरु बेचेको साइनो’ नभएका विषयमा पनि सबैले उनलाई तारो बनाउँछन् । तर, उनको पक्षमा बोलिदिने को ? के प्रचण्ड एक्ला बृहस्पति हुँदा नै अभिभावकत्व खोज्ने लाखौं शुभेच्छुकहरुको भलो हुने हो त !